ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း - Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd.
CNC စက်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများသည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လျက်ရှိပြီး အစိတ်အပိုင်းများ ပြုပြင်ခြင်း၏ အရေအတွက်၊ တိကျမှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့အတွက် လိုအပ်ချက်များ မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ချက်များလည်း တိုးလာလျက်ရှိပါသည်။ . အစိတ်အပိုင်းများ ပြုပြင်ခြင်း၏ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အချပ်ပြားပုံသဏ္ဍာန် နံရံကပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အခြားသာမန် အစိတ်အပိုင်းများထက် ပိုမိုခက်ခဲသည်။ အထူးသဖြင့်၊ တိကျသော disc-shaped porous အစိတ်အပိုင်းများကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင် မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်များလိုအပ်ပါသည်။ အများကြီး။ အစိတ်အပိုင်းများ၏ machining တိကျမှုကိုသေချာစေရန်၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကို စီမံထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သောစက်ကိရိယာကိုရွေးချယ်ပြီး သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နည်းပညာကို ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
တိကျသော disc-shaped porous အစိတ်အပိုင်းများသည် သာမန်စက်ကိရိယာများနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းပညာများဖြင့် ကိုက်ညီရန် ခက်ခဲသော တိကျမှုတွင် မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ အစိတ်အပိုင်းများသည် နံရံကပ်ချပ်စ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး ပြုပြင်နေစဉ်အတွင်း အလွယ်တကူ ပုံပျက်သွားကာ အလုံးစုံတိကျမှုလိုအပ်ချက်များကို မြင့်မားစေပြီး လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲစေသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စက်ကိရိယာကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းပညာအစီအစဉ်ကို ချမှတ်ခြင်းအပြင်၊ တန်ဆာပလာများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကုပ်ဆွဲခြင်းအား အထူးသတ်မှတ်ထားရမည်။ စမ်းသပ်မှုများနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ အများအပြားပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ စီမံဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် အပြည့်အစုံကို ရရှိခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုနမူနာများသည် လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး စီမံဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
I. စက်ကိရိယာရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်၊ တိကျမှုမြင့်မားသော ညှိနှိုင်းမှုတည်နေရာပြကိရိယာနှင့် ခိုင်မာအားကောင်းသော သြဒီနိတ်ငြီးငွေ့ဖွယ်စက်ကို စက်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤစက်ကိရိယာသည် လေယာဉ်ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် အလင်းဝင်ပေါက်စက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ အစိတ်အပိုင်းအပေါက်များကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အညွှန်းရေးနည်းကို ရွေးချယ်ထားသည်။ မြင့်မားသောတိကျမှုအညွှန်းကိန်းဒစ်ဂျစ်တယ်အမျိုးအစားဒစ်ဂျစ်တယ်လှည့်ကွက်ကိုစက်ကိရိယာစားပွဲပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးအစိတ်အပိုင်းများကိုလှည့်ကွက်ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်ပြုပြင်ပြီးသောအစိတ်အပိုင်းများ၏မတူညီသောအနေအထားများသည်လှည့်ကွက်ကိုလှည့်ရန်သာလိုအပ်သည်။အပေါက်ကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ စားပွဲဝိုင်းသည် ပုံသေဖြစ်နေသည်။ turntable တပ်ဆင်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းများ၏လှည့်ခြင်းဗဟိုနှင့် turntable ၏လည်ပတ်ဗဟိုသည်တိုက်ဆိုင်မှု၏မြင့်မားသောဒီဂရီကိုထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ indexing error ကို အတတ်နိုင်ဆုံး သေးငယ်သော အကွာအဝေးအတွင်း ထိန်းချုပ်ထားသင့်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းကြောင်းမှ၊ တိကျသော disc-shaped porous အစိတ်အပိုင်းများကို machining သည် အခြားအစိတ်အပိုင်းအမျိုးအစားများနှင့် များစွာကွာခြားမှုမရှိပါ။ အခြေခံလမ်းကြောင်းမှာ- ကြမ်းတမ်းသောစက်ပြုပြင်ခြင်း → သဘာဝအတိုင်း အိုမင်းခြင်း → တစ်ပိုင်းအချောထည် → သဘာဝအတိုင်း အိုမင်းခြင်း ကုသခြင်း → ပြီးမြောက်ခြင်း → အပြီးသတ်ခြင်း ။ ကြမ်းတမ်းသောစက်သည် အစိတ်အပိုင်း၏အလွတ်ကို ခုတ်ထစ်၍ ကြိတ်ခွဲကာ ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်ခွဲကာ အတွင်းမျက်နှာပြင်နှင့် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုစလုံးကို တူးကာ၊ အပေါက်ကြမ်း၍ အစိတ်အပိုင်း၏ အပြင်ဘက်အပေါက်ကို ကြမ်းတမ်းစွာ ငြီးငွေ့ရန်ဖြစ်သည်။ Semi-finishing ကို အရွယ်အစား လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အစိတ်အပိုင်းများ ၏ အတွင်းနှင့် အပြင် စက်ဝိုင်းများ ၏ မျက်နှာပြင်ကို တစ်ပိုင်းပြီးအောင် ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုပြီး အစွန်း နှစ်ခု သည် အရွယ်အစား လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် တစ်ပိုင်း ပြီးသွားသည် ။ အပေါက်များနှင့် အပြင်ဘက် စက်ဝိုင်းပုံများသည် တစ်ပိုင်းပြီးစ ပျင်းစရာကောင်းသည်။ Finishing ဆိုသည်မှာ အစိတ်အပိုင်းများ၏ အပေါက်များနှင့် ပြင်ပအပေါက်များကို ပြေပြစ်စေရန် အထူးပစ္စည်များနှင့် ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အတွင်းနှင့် အပြင်စက်ဝိုင်းများကို ကြမ်းတမ်းစွာ လှည့်ပြီးနောက် အနားသတ်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် နှစ်ဖက်စလုံးကို ကြမ်းတမ်းစွာ ကြိတ်ခွဲကာ နောက်အပေါက်နှင့် groove finish အတွက် အုတ်မြစ်ချပါ။ နောက်ဆက်တွဲ ပြီးစီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အဓိကအားဖြင့် အပေါက်များနှင့် ပြင်ပ grooves များကို တိကျစွာ ပြုပြင်ရန်အတွက် အထူးပစ္စည်များနှင့် ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိတ်အပိုင်းများကို တိကျစွာ ပြုပြင်ခြင်းအတွက်၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း ဘောင်များ သတ်မှတ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးပါပြီး စက်ပစ္စည်း၏ တိကျမှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်စေပါသည်။ ဖြတ်တောက်သည့်ပမာဏကို သတ်မှတ်သောအခါ၊ အစိတ်အပိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များ၊ ကိရိယာဝတ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကုန်ကျစရိတ်တို့ကို အပြည့်အဝ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ငြီးငွေ့စရာသည် ဤကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို စီမံလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘောင်များသတ်မှတ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အပေါက်ကို ငြီးငွေ့ရန် ကြမ်းတမ်းသော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် နောက်ကျောဖြတ်တောက်ခြင်း ပမာဏ အများအပြားကို အသုံးပြုပြီး မြန်နှုန်းနိမ့် ဖြတ်တောက်ခြင်း နည်းလမ်းကို လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။ semi-precision ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော အပေါက်များ၏ ငြီးငွေ့မှုဖြစ်စဉ်တွင်၊ နောက်ပြန်ဆုပ်ခြင်းအနည်းငယ်ကို အသုံးပြုသင့်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အစာစားနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် မြန်နှုန်းမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများကို ချမှတ်သင့်သည်။ မျက်နှာပြင်အစိတ်အပိုင်း၏အရည်အသွေးကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း။
တိကျသော disc-shaped porous အစိတ်အပိုင်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက်၊ ချွေးပေါက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ အာရုံစိုက်ရုံသာမက၊ အစိတ်အပိုင်းများ၏ အလုံးစုံလုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ တိကျမှုအပေါ် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော စီမံဆောင်ရွက်မှု၏အခက်အခဲလည်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အစိတ်အပိုင်းများ၏ လုပ်ငန်းစဉ် အရည်အသွေးနှင့် တိကျသေချာစေရန်အတွက် သင့်လျော်သော စက်ကိရိယာကို ရွေးချယ်ရန်၊ သိပ္ပံနည်းကျ လုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲရန်၊ ညှပ်အတွက် အထူးကိရိယာကို အသုံးပြုရန်၊ ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော ကိရိယာကို ရွေးချယ်ရန်နှင့် ဖြတ်တောက်မှုပမာဏကို သင့်လျော်စွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းပညာဖြင့် ဆောင်ရွက်သော နမူနာအစိတ်အပိုင်းများသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး နောက်ဆက်တွဲ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှုအတွက် အုတ်မြစ်ချပေးသည့်အပြင် အလားတူ အစိတ်အပိုင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အကိုးအကားနှင့် ကိုးကားချက်ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။